5 सर्वश्रेष्ठ युरोपेली क्यापिटल यात्रा रेल | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5सर्वश्रेष्ठ युरोपेली क्यापिटल यात्रा रेल
समय अन्त आएको छ – चाहे तिमी सिर्फ विश्वविद्यालय स्नातक गर्नुभएको, आफ्नो वार्षिक छुट्टी को लागि बाहिर शीर्षक छन्, वा भूमि यात्रा आकर्षणलाई छुटेका सकिँदैन भनेर निर्णय गरेका छौं, तपाईं रेल द्वारा युरोप यात्रा गर्न रोजेका. यो रोमान्टिक विचार छ, हजारौं यात्रा वर्ष भर एक ट्रेक. यो पनि पूर्ण अत्यास हुन सक्छ. युरोप आफ्नो उत्कृष्ट रेल जडानहरू लागि जानिन्छ. महाद्वीप-फैले यूएस रेल पास गर्न सस्तो स्थानीय टिकट देखि, यो एक overnighter मा हप र आइपुग्छु गर्न सजिलो छ तपाईंको गन्तव्य अर्को बिहान, तपाईंको नवीनतम साहसिक लागि तयार.
तर तपाईं कहाँ जाने गर्नुपर्छ? चाहे त्यो आफ्नो पहिलो पटक वा तपाईंको दशौं छ, उपलब्ध रेल को सरासर मात्रा तनाव सक्छ, भ्रम, र हराएको को पूर्ण डर. छैन चिन्ता – किनकि हामी यहाँ एक बाल्टिन सूची जम्मा गरेका छौं5रेल द्वारा यात्रा गर्न सबै भन्दा राम्रो युरोपेली क्यापिटल. बस, बकसुआ अप, र सेव फ्रान्स गरेको उत्कृष्ट baguettes लागि कोठा, एक सवारी हामी जाँदै हुनुहुन्छ किनभने.
1. सर्वश्रेष्ठ युरोपेली क्यापिटल यात्रा रेल: पेरिस, फ्रान्स
रूपमा प्रतिज्ञा, हामी सरासर यो यात्रा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध र चर्चित रोमान्टिक शहर मध्ये एक स्टप संग. पेरिस वरिपरि सबै भन्दा राम्रो रेल जडानहरू केही छ, शहर को केन्द्र भर चलिरहेको रेलका साथ, त तपाईं एक स्टेशन बाट कहिल्यै टाढा हुनुहुन्छ. पेरिस गर्न कुराहरू भरिएको छ, तपाईं शहर जीवनको एक झलक प्राप्त गर्न कम्तीमा तीन दिनको लागि यहाँ रहन चाहनुहुन्छ छौँ त.
को द्वारा रोक्न louvre को मोना लिसा मा एक पिक लागि वा चाप डी ट्रायोम्फे चढाई गरेर ती glutes खेती. को राइन मा एक रात्रिभोज क्रूज आनन्द, केही फ्रान्सेली बुटीक एउटा यात्रा तिर्न, र यो चमकदार एफिल टावरमा लिनुहोस् जुन यो साँझको जीवनको लागि आउँदछ.
को पाठ्यक्रम, पेरिस यसको शहर को केन्द्र भन्दा बढी छ. को sprawling महानगरबारे दुई लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई घर हो, भन्नाले तपाईं साँच्चै यो प्रस्ताव के छ को सतह scratching बिना यहाँ सप्ताह खर्च गर्न सक्छन्. को पोंट Alexandre III मा hordes देखि एक दिन यात्रा र टाउको भर्साइल्लेज लागि Getaway, जहाँ शाही महल अझै पनि 1700 का देखि यसको रिक्ति बावजुद सर्वोच्च शासनकालमै. दिन टिकट सिर्फ 20 € छन् र दरबारमा प्रवेश समावेश, बगैंचा, र अधिक. अझ राम्राे, रेल को महल सीधै शहर केन्द्र चलाउन, जो त्यहाँ एक समीर रही बनाउँछ. यो interconnectedness आधिकारिक रेल यात्राको लागि हाम्रो सबै भन्दा राम्रो युरोपेली क्यापिटल को पेरिस एक बनाउँछ.
2. लन्डन, बेलायत
एक मेरो व्यक्तिगत को मनपर्ने शहर र पेरिस देखि एक मात्र दुई घन्टा संयुक्त राज्यको राजधानी निहित: लन्डन. सबै जीवन को हिँड्छ देखि संस्कृतिका यो पग्लिने पट एक whopping नौ लाख मान्छे घर छ. spirited सोहो गर्न पश चेल्सी देखि, तपाईको पार्टीमा सबैका लागि गतिविधिहरू फेला पार्नुहुनेछ. को Shard आफ्नो रात शेक्सपियर गरेको ग्लोब भन्दा शीर्षक र समाप्त अघि नवीनतम musicals को क्याच एक, लन्डन मा ऊंची टावर.
तपाईं यस शहर मार्फत हतार गर्न चाहनुहुन्छ छैन, त्यसैले तदनुसार आफ्नो समय योजना. तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ कि Harry Potter स्टूडियो (शहर को केन्द्र देखि एक घण्टा), या बस लन्डन को टावर जस्तै प्रमुख स्थलहरू लिनुको, सेन्ट. पावलको गिरजाघर, वेस्टमिंस्टर एब्बे, बिग बेन, वा लन्डन आँखा, संसारको बित्यो एक पटक लण्डन खर्च हरेक मिनेट देश जसको साम्राज्य बारेमा थप जान्न मौका छ.
यूरोस्टार हाई स्पीड ट्रेन तपाइँ पेरिस बाट लन्डन केन्द्र मा मात्र दुई घण्टा मा लिन्छ, भन्नाले तपाईं कम समय परिभ्रमण र थप समय adventuring खर्च छौँ. यसरी, हामी लन्डन लाई रेल द्वारा यात्रा गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो यूरोपीय राजधानीहरु को लागी मान्दछौं.
3. सर्वश्रेष्ठ युरोपेली क्यापिटल यात्रा रेल: एम्स्टर्डम, नेदरल्यान्ड्स
यसको नहरहरुमा र साइकल-निर्भर जनसंख्या लागि प्रसिद्ध, एम्स्टर्डम को नेदरल्यान्ड गरेको राजधानी रूपमा चमकता. एक अद्वितीय डिजाइन, एम्स्टर्डम एक utterly आकर्षक शहर र युरोपेली क्यापिटल बीच एक standout छ. पेरिस बाट गाडिहरु तीन घन्टा पछिल्लो र एम्स्टर्डम Centraal तपाईं जम्मा, शहर को दिल मा स्थित.
Bols ककटेल को घर जाँदै अघि भ्यान Gogh संग्रहालय मा लिन Museumplein टाउको & Genever अनुभव, जो आफ्नो टेस्टिङ कोठा मा ककटेल को आफ्नो रुचि समावेश.
क्रूज गर्न नहरहरुमा भूल छैन, या त. तपाईं शहरको सार्वजनिक डुङ्गा को एक मा समर्पित भ्रमण वा हप लिन चाहे, तपाईं पानी पूरै नयाँ दृश्य प्राप्त. डुङ्गा बाइक लागि यसको propensity बावजुद, एम्स्टर्डम उच्च गतिको रेल मार्फत युरोप भन्दा सबै सजिलै पहुँच छ, रेल यात्रा को लागि सबै भन्दा राम्रो युरोपेली राजधानी लागि यो अर्को शीर्ष दावेदार बनाउन.
जर्मन कौशल एक नियमको, बर्लिन शहर एकता मा एक आकर्षक अध्ययन हो. दुई मा बर्लिन पर्खाल द्वारा विभाजित, यो राजधानी मात्र एकतामा पुनःप्राप्त 1989 पूर्व मा कम्युनिस्ट शासन पतन निम्न. त्यस बेला देखि, यसलाई शहरी विकास संग विस्फोट र अब राम्रो लाख दुई मानिसहरूलाई घर हो. यसलाई पूर्ण छ शिल्प बियर बारहरू, संग्रहालयहरु, र पर्खाल को graffitied रहलपहल.
देशको संस्कृति को केन्द्र रूपमा, बर्लिन अवश्य-यात्रा हो. तपाईं एक ओपेरा को रूप मा परिष्कृत मनोरञ्जन लागि देख वा युरोप मा hippest haunts केही हान्न खोजिरहेका कि, बर्लिन छुटेका छैन गर्न सकिन्छ.
हुनत यो एम्स्टर्डम देखि यहाँ प्राप्त गर्न कम्तिमा छ घण्टा लिन्छु, त्यहाँ प्रति दिन धेरै रेल छन्, भन्नाले तपाईं आइपुग्दा आफ्नै समय तालिका सेट गर्न सक्नुहुन्छ.
5. सर्वश्रेष्ठ युरोपेली क्यापिटल यात्रा रेल: प्राग, चेक गणतन्त्र
पश्चिमी युरोपेली क्यापिटल देखि भिन्न, प्राग पूर्वी युरोप मा चेक गणतन्त्र को राजधानी र सबै भन्दा प्रसिद्ध मध्य यूरोपीय शहर मध्ये एक छ. संसारमा सबै भन्दा प्रसिद्ध पुस्तकालयहरु मध्ये एक घर, को Klementium, प्राग हरेक कुना यसको संस्कृति showcases. को Astronomical घडी भ्रमण, संसारमा सबैभन्दा पुरानो अपरेटिङ घडी. यताउता घुम्न ओल्ड टाउन स्क्वायर, जहाँ cobblestone सडकमा र pedestrianized लेन मतलब तपाईं चिन्ता बिना भटक घण्टा खर्च गर्न सक्छन्.
शीर्ष शहरमा धेरै तहखाने बारहरू को एक एक पेय संग आफ्नो समय बन्द एक बाहिर शीर्षक अघि संगीत तिहार.
प्राग अन्य शहर संग उत्कृष्ट रेल लिंक दावा, चार बर्लिन देखि एक यात्रा समय र आधा घण्टा सहित. जारी राख्नु अघि शहर इतिहास अवशोषित यहाँ रोक्न तपाईंको यात्रा युरोप बाँकी भर.
यूरोप एक विशाल र विविध परिदृश्य हो जसको संघको मतलब ट्रेन बाट यात्रा गर्नु पहिलेभन्दा सजिलो छ. आफ्नो समय यी ऐतिहासिक क्यापिटल गर्न यात्रा गर्न borderless देशहरूमा फाइदा लिन. विमानस्थलमा को टाउको दुखाइ र यसको भीडलाई र overpriced विमान खाना छोड्न र यात्रा गर्न एक रेल प्रयोग. तपाईं बोर्ड मा एक क्षेत्रीय मार्ग हप वा उच्च गतिको रेल लागि एक सानो अतिरिक्त खर्च कि, तपाईं रेल यात्रा रमाइलो छौँ, दर्शनीय स्थलहरु, र अधिक धेरै.
हामी तपाईंलाई हाम्रो यात्रा सुझावहरू ढाकिएको मिल्यो. अब केही रेल टिकट बुक गर्न यो समय! एक ट्रेन सेव रेल टिकट किन्नको लागि एक ठाउँ हो.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सर्वश्रेष्ठ युरोपेली क्यापिटल यात्रा रेल” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/european-capital-travel-train/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
राजधानी राजधानी यूरोपेन्ट्रावेल europetrains eurotrip लन्डन रेल यात्रा travelfrance travelgermany travelnetherlands